Isungulwe ngonyaka we-1993, i-3F Electronics Industry Corp ingumkhiqizi osebenza kahle futhi othumela izinto kwamanye amazwe obhekene nokuklama, ukuthuthukiswa kanye nokukhiqizwa kwezintambo zikagesi, izintambo zocingo, amashubhu wokuvikela, ukwenza amahhanisi ezintambo ngokwezifiso, kanye nethayela lekhebula leyiloni.
Sitholakala eShenzhen, ngokufinyelela okulula kokuhamba. Yonke imikhiqizo yethu ihambisana namazinga ekhwalithi aphesheya futhi ayaziswa kakhulu ezimakethe ezahlukahlukene emhlabeni jikelele.
Yonke imikhiqizo yethu inesitifiketi se-UL, i-ROHS ne-REACH, enye intambo ekhethekile inesitifiketi se-VDE, futhi ucingo lwezimoto luneMelika ejwayelekile, ejwayelekile yaseJapan, ejwayelekile yaseJalimane ukuhlangabezana nemakethe ehlukile.
Simboza indawo engamamitha-skwele angama-20,000, manje sinabasebenzi abangaphezu kwama-600, siziqhayisa ngesibalo sonyaka sokuthengisa esidlula ama-USD 150 million futhi njengamanje sithumela ama-80% womkhiqizo wethu emhlabeni jikelele.
Izinsiza zethu ezihlonyisiwe nokulawulwa kwekhwalithi okuhle kakhulu kuzo zonke izigaba zokukhiqiza kusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka okuphelele kwamakhasimende.
Ngaphandle kwalokho, sithole isitifiketi sekhwalithi ye-ISO9001 yamazwe omhlaba ngo-2001, futhi sathola isitifiketi se-TS16949 & Qc080000 ngo-2007. Futhi inkampani yethu inesitifiketi se-IATF16949 futhi.
Ngenxa yemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kanye namakhasimende avelele, sizuze inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke efinyelela eYurophu, eMelika, e-Australia nase-Asia.
Ngasikhathi sinye, sinehhovisi lezinsizakalo eli-17 eChina esifundazweni esihlukile, futhi sinehhovisi lezinsizakalo ezi-3 phesheya kwezilwandle e-USA, HK naseThailand ukunikela ngokulandela okuhle kakhulu.
Imboni ye-elekthronikhi, Ukukhiqizwa kwemishini yemishini; ikakhulukazi ekwenziweni kwamabhanoyi, ukukhiqizwa kwamarobhothi, ukukhiqizwa kwezimoto zamandla ezintsha nokwenziwa kwemishini yasendlini.
Ukwenza imikhiqizo iphephe kakhudlwana; Gcina izinsiza, futhi wenze izimpilo zethu zihle kakhulu.
Ipulatifomu yethu Yesenzo
FAST, FLEXIBLE, IMPENDULO.
UKUQALA OKUQALA, ISIQINISEKISO SOKUTHOLA, INKONZO ESEBENZA, IKHASIMENDE LOKUQALA, ISINYATHELO NGESINYATHELO, I-ZERO- DEFECT- MANAGEMENT.